ယနေ့ ချိန်ထိ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့ နိမိတ်တွေ…. – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > ယနေ့ ချိန်ထိ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့ နိမိတ်တွေ….
ယနေ့ ချိန်ထိ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့ နိမိတ်တွေ….
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ခန့်ကစင်္ကာပူဆိုတဲ့တံငါကျွန်းရွာလေးကလီကွမ်ယုဆိုတဲ့လူငယ်လေးက အခုလို ပြောဖူးပါတယ်….
(၅)သံခမောက်ဆောင်း လေးယောက် ပေါ်လိမ့် မည် ။ တပ်မတော် မှာ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့သူများထဲမှ လေးယောက်မှာ နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်မည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမော င်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ ဖြစ်သည်။
(၆) ဧရာဝတီ ခမ်းလိမ့်မည်။ ယခုပင် နွေရာသီ ဆို ဧရာဝတီ မှာ မော်တော်၊ သင်္ဘောတွေ ဝါးလုံးထောက် စမ်းပြီးသွားနေရပြီ။ မြစ်ဆုံစီမံ ကိန်းသာ အကောင်အထည်ဖော်လို့ကတော့ သွားပြီ။
(၉) ဗုဒ္ဓရာဇာကိန်းနဲ့အညီ နန်းသိမ်းလိမ့်မည်။ သို့သော် ထို အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်ပြီးနောက် အမျိုးဘာသာသာသနာ ကို စောင့်ရှောက် အလေးထားသော မင်းအစိုးရ တက်လာပြီး သာသနာတော် ကို ပြန်လည်ထွန်းလင်းစေ လိမ့်မည် ။ (ဗုဒ္ဓရာဇာ= ဗုဒ္ဓသာ သနာပြုမင်း)
(၉) ဗုဒ္ဓရာဇာကိန်းနဲ့အညီ နန်းသိမ်းလိမ့်မည်။ သို့သော်ထို အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်ပြီးနောက် အမျိုးဘာသာသာသနာ ကို စောင့်ရှောက် အလေးထားသော မင်းအစိုးရ တက်လာပြီး သာသနာတော် ကို ပြန်လည်ထွန်းလင်းစေ လိမ့်မည် ။ (ဗုဒ္ဓရာဇာ= ဗုဒ္ဓသာ သနာပြုမင်း)
Previous Article လက်သူ ကြွယ် လက်ချောင်းအောက်မှာ ဒေါင်လိုက် မျဉ်းတိုကလေး အဖြစ်တည်နေမယ်ဆိုရင်
Next Article အရင်လို တပည့်တွေနဲ့ English စာပြန်သင်ချင်တာပေါ့ သားရယ်